संघीय समाजवादी फोरम स्थानीय तहको चुनावमा किन सहभागी? | संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost
संघीय समाजवादी फोरम स्थानीय तहको चुनावमा किन सहभागी?
उपेन्द्र यादवको नेर्तृत्वमा मधेशमा जनविद्रोह भयो । देशले संघीयता पायो । मधेशी जनताको हक अधिकार अन्तरिम संविधानमा लेखाउन तत्कालिन मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालका नेता उपेन्द्र यादव सफल भए । तर विभिन्न शक्ति केन्द्रको डिजाइनमा फोरम नेपाललाई मधेशी नेताहरूले नै टुक्रा टुक्रा बनाए र पछि आफू–आफू निर्वाचनमा गए जसको कारणले मधेशी जनताको पार्टीले होइन शोषक सामन्तका पार्टीहरूले जिते । फोरम नेपाललाई फुटाएर गच्छदार कुर्चीको मात्र राजनीति गरिरहेका छन् भने अरू टुक्रिएका पार्टीहरू कुण्ठा पोखिरहेका छन् ।
मधेशले मात्रै लडेर मधेशी जनताले अधिकार पाउन नसक्ने ठम्याउँदै अरू पहिचानवादी र उत्पीडत जनताको पार्टीहरू संघीय समाजवादी पार्टी र खस समावेशी पार्टीलगायतसँग एकता गरी संघीय समाजवादी फोरम निर्माण गरेर उपेन्द्र अगाडि बढे । अरू पहिचानवादी पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्दै समेत निरन्तर पहिचान प्राप्तिको आन्दोलनको नेतृत्व ससफो नेपालका अध्यक्षको हैसियतले गरी नै रहनुभएको छ ।
संविधान संसोधनका लागि हजार प्रयास भएका हुन् । सरकार तयार हुँदा पनि प्रतिपक्ष नामको नेकपा एमाले पार्टीका नेता केपी ओली मधेशी र आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिन भन्दा पूर्व राजासँग साँठगाँठ गरेर संसोधन प्रस्ताव अघि बढाउन दिइएन ।
हेक्का होस् एमाले पार्टी कुनै मजदुर र किसान अनि उत्पीडित वर्ग, जाति समुदायको पार्टी हुँदै होइन त्यो मौका परे राजासँग साँठगाँठ गरी देशमा जातीय र वर्गीय एकाधिकार लाद्ने पार्टी बनिसकेको छ । र एमालेका नेताहरूको चरित्र र व्यवहारले त्यही पुष्टि गर्छ । उत्पीडित जातिको पक्षमा संविधान बनाउन भन्दा संवैधानिक राजा र हिन्दु राज्य नेपाल अनि संघीयता होइन एकात्मक प्रणाली देशमा लाद्ने रणनीति नै बनाएर लागीरहेको छ । निर्वाचन क्षेत्र थप्ने प्रस्ताव सरकारलाई लान बाध्य बनाउन त सकियो तर अदालत लगाएर पास हुन दिइएन । न्यायलयले पनि समय कालमा प्रतिगामी निर्णय गर्दै आएको छ ।
राजावादी, एमाले र अदालतको समेत घेराबन्दीमा पारिएको पहिचानवादीको आन्दोलनको रक्षा गर्न चुनावलाई सदुपयोग गर्नुको बिकल्पै रहेन । परिस्थितीले घचटेर ल्यायो । क्षणिकतामा बहकाउनुको सट्टा परिस्थितीको आँकलन गरेर अगाडि बढ्नु नै रणीतिक राजनीति हो । त्यसैले क्रान्तीको नेतृत्व गर्नेले आबेगमा आएर होइन विवेकमा रहेर निर्णय गर्नुपर्छ र गरौं ।
आफूलाई ठूला ठान्ने र सत्ता स्वार्थमा लाग्ने मधेशी नेताहरूले आन्दोलनबाट स्थापित र सबैजसो जीवन सडकमै बिताएका नेता उपेन्द्र यादवको अस्तित्व कहिल्यै हृदयदेखि स्वीकार गर्न चाहेनन् परिणामत मधेशी जनता र सारा उत्पीडित पहाडका जनताले पनि हारीरहे ।
उता ओली कम्पनी यो संविधान असफल पारी संबैधानिक राजा सहितको केन्द्रीकृत र हिन्दु राज्य बनाउने कसरतमा रणनीतिका साथ लागिरहेको कुरा थाहा हुँदै गएको छ । प्रहरी सेना र अदालतले कार्यकारी सरकारलाई भन्दा केपी कम्पनीलाई साथ दिइरहेको कुरा छर्लङ्ग छ पछि छोरीको विवाह र नातिको ब्रतवन्धको नामबाट राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र ओलीसँग पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सामिप्यता बढ्नु कुनै संयोग होइन । त्यति मात्र होइन बुझी नबुझी जनताले पनि एमालेलाई साथ दिनु भनेको एकात्मकवादी आक्रमक र संघीयतावादी पहिचानवादी रक्षात्मक अवस्थामै पुग्नु हो ।
यस्तो संकटको घडी र बस्तु परिस्थितीलाई मध्यनजर राख्दै हाम्रो पार्टी ससफो नेपालले चुनावलाई आन्दोलनको रूपमा उपयोग गर्ने रणनीति बनायो । उता भने मधेशको हितको कुरा गर्ने तर ससफो नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई छोड्ने रणनीतिका साथ राजपा नेपाल नामका ठूला नेताहरू फेरि पनि ससफोलाई कमजोर बनाउने र शासकलाई नै फाइदा पुर्याउने मनासायले नयाँ रणनिती नै बनाएर लागि परे । र परिरहेका छन् ।
संविधान संसोधनका लागि हजार प्रयास भएका हुन् । सरकार तयार हुँदा पनि प्रतिपक्ष नामको नेकपा एमाले पार्टीका नेता केपी ओली मधेशी र आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिन भन्दा पूर्व राजासँग साँठगाँठ गरेर संसोधन प्रस्ताव अघि बढाउन दिइएन । हेक्का होस् एमाले पार्टी कुनै मजदुर र किसान अनि उत्पीडित वर्ग, जाति समुदायको पार्टी हुँदै होइन त्यो मौका परे राजासँग साँठगाँठ गरी देशमा जातीय र वर्गीय एकाधिकार लाद्ने पार्टी बनिसकेको छ । र एमालेका नेताहरूको चरित्र र व्यवहारले त्यही पुष्टि गर्छ ।
पार्टी एकीकरण हुँदा पनि पहाडिया जनतासँग उपेन्द्र यादव मिल्यो अब मधेशको मुद्धा छोड्छ भनेर उनीहरूले झ्याली नै पिटे । तर जनताको आकर्षण झन तिब्र भयो । यता ससफो नेपालकै नेतृत्वको प्रयासमा निर्माण भएको र पहाडेसँगको सहकार्यमा गठित संघीय गठवन्धनमा पहिला मिलेको आरोप लगाउनेहरू नै सामेल हुन आए । र त्यो भन्दा पनि अघि बढेर संघीय गठबन्धनको संयोजक आफैले आफैलाई उनीहरूले घोषणा गर्ने काम गरे । एकातिर शोषक सामन्ती र जातीवादी पार्टी एमालेको धार अर्कोतिर मधेशी जनताको पार्टीको नामबाट अवसरबादी झुण्डको धारमा ससफोका नेताहरूलाई रेट्ने काम हुँदैछ । माघसम्म संविधान कार्यन्वयन हुन नदिने र संवैधानिक राजा राख्ने एमाले डिजाइन पनि कमको छ भनेर नसोचौं ।
उता संसोधन प्रस्ताव संसदमा टेबल भैसकेको छ अव यो कुनै पनि उपयुक्त समय हुँदा अगाडि बढाउन सकिन्छ अहिले दुई तिहाई पुगेको छैन त्यसैले हतारिएर प्रकृयामा लानु प्रतिउत्पदक हुने पनि पक्का छ ।
त्यसैले राजावादी, एमाले र अदालतको समेत घेराबन्दीमा पारिएको पहिचानवादीको आन्दोलनको रक्षा गर्न चुनावलाई सदुपयोग गर्नुको बिकल्पै रहेन । परिस्थितीले घचटेर ल्यायो । क्षणिकतामा बहकाउनुको सट्टा परिस्थितीको आँकलन गरेर अगाडि बढ्नु नै रणीतिक राजनीति हो । त्यसैले क्रान्तीको नेतृत्व गर्नेले आबेगमा आएर होइन विवेकमा रहेर निर्णय गर्नुपर्छ र गरौं ।
(सिटौला, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य छन् ।)
प्रकाशित, १ असार २०७४ (15 June 2017)।
केपी ओली र माधव नेपालले यसरी गरेका थिए राष्ट्रघाती महाकाली सम्झौता
मधेसको राजनीति र दिल्लीको ‘डिजाइन’मा राजपाको गठन
जनयुद्ध लम्बिएको भए भारत-चीन पनि सङ्घर्षमा तानिन्थे
Posted by admin on Jun 14 2017. Filed under Breaking News, दृष्टिकोण. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leavearesponse or trackback to this entry